ရထားခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများမော်ကွန်းတိုက် | စာမျက်နှာ5၏ 15 | တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဒါဟာအိပ်မက်ရဲ့ - အားလပ်ရက်အပေါ်သွားနှင့်ထိုသို့ပေးဆောင်ရ. မသာကြောင်း, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ, နေရာထိုင်ခင်း, နှင့်စားနပ်ရိက္ခာများလွန်းသင်တို့အဘို့ paid. မဖြစ်နိုင်သော, မှန်သော? ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမှသင်ကဲ့သို့သောမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှပြန်လည်ပေးဆပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ရောမမြို့တစ်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မြို့ဖြစ်၏, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးခရီးသွားအမျိုးမျိုးတစ်နည်းနည်းမနှောမြော. ရှည်လျားသောအလုံအလောက်ကဧရိယာတဝိုက်ကြည့်ရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိလိမ့်မယ်စူးစမ်းဖို့ရောမမွို့ရှိနေဖို့သူများသည်, လွန်း. ကံကောင်းစွာ, ထိုနေ့ရက်သည်ခရီးစဉ်များအတွက်များမှာကားအဘယ်သို့! ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းစဉ်းစား…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားဘို့ဤအထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများသင့်ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်လျော့ပါးကူညီသင့်တယ်. ပါစေရဲ့ကရင်ဆိုင်ရသောကြောင့်, သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါသည်! သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုင်, အိမ်မှာသို့မဟုတ်အခြားသူများရဲ့စောင့်ရှောက်မှု၌သင်တို့၏တိရိစ္ဆာန်များထွက်ခွာ၏အတွေးဖြစ်ပါသည်. သိသာထင်ရှားတယ်, ဘယ်သူမှ…